laacib » Jose Mourinho oo mid ka mid ah ciyaartoyda mustaqbalka kuwooda ugu fiican yurub weydiistay inuu kooxdiisa iska joogo.
Jose Mourinho oo mid ka mid ah ciyaartoyda mustaqbalka kuwooda ugu fiican yurub weydiistay inuu kooxdiisa iska joogo.
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa lagu soo waramayaa inuu talaabo u qaaday saxiixa da’yarka Ajax Amsterdam Justin Kluivert waana wiilka uu dhalay xidigii hore qaranka Holland Patrick Kluivert.
Jose Mourinho iyo wiilkaan sheeko xiiso leh ayaa dhexmartay kadib ciyaartii finalka UEFA Europa League ee kooxaha Ajax iyo Man United ku dhexmartay dalka Sweden, balse xiligaas waxey saxaafadd durba baahisay inuu xagaaga 2018/2019 lasoo saxiixan doono.
Bishii lasoo dhaafay ayaa aad loola xiriiriyay 18-jirkaan heerka caalami inuu imaan doono Old Trafford, waxaana kaliya qandaraaskiisa kaga haray 18-bilood – sidaas darteed Jose wuxuu u sheegay wiilka inuu iska joogo kooxdiisa inta ka dhiman xilli ciyaareedka.
wargeyska Sport ayaa baahiyay in Kluivert uu doonayo imaatinka Old Trafford waqtigaan, balse Jose uu wiilka dajiyay isla markaana u sheegay inuu sugo ilaa kadib koobka Aduunka markaas oo laacibkii ay sameyn doonto suuqgal fiican.